Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer Factory - China Normal Structure Bulldozer Manufacturers, Abahlinzeki
IHydro-static Bulldozer SD6K LGP
I-Bulldozer SD7N eshayela phezulu
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer TYS165-3
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer TS160-3
Isakhiwo Esijwayelekile I-Bulldozer TY320-3
Isakhiwo Esijwayelekile I-Bulldozer TY165-3
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer TY160-3
I-TYS165-3 bulldozer yi-dozer yohlobo lwethrekhi yohlobo lwamahhashi eyi-165 ene-hydraulic drive ngqo, i-semi-rigid imisiwe futhi isiza ukusebenza kwe-hydraulic, umshayeli we-hydraulic blade control kanye ne-single level steering and braking control.
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer TYS230-3
I-TY230-3 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever.
I-TS160-3 ngogandaganda imisiwe okwesikhashana, idrayivu eqondile, ukulawula ukulawula umshayeli. Umfutholuketshezi olawulwa ngohlobo lwe-bulldozer ngohlobo lwamafutha lukhulise imivimbo emikhulu, ihlale ihlanganyele, i-switch sleeve switch, izinduku eziphindwe kabili ziqhutshwa ngomshini.
I-TY320-3 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever.
I-TY160-3 bulldozer i-semi-rigid, ukushintshwa kwamandla, ukulawula amandla okusiza, umshayeli we-pilot wokubacindezela ulawula, nge-gearbox eyodwa elawulwa ngebhokisi leplanethi.
I-TY165-3 bulldozer yi-dozer yohlobo lwethrekhi yohlobo lwamahhashi eyi-165 ene-hydraulic drive ngqo, i-semi-rigid imisiwe futhi isiza ukusebenza kwe-hydraulic, umshayeli we-pilot hydraulic blade control kanye ne-single level steering and braking control.
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer TY230-3
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer TY220
I-TY220 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever.